लगानीकर्ताले अब अनलाइनबाटै युजर आईडी र पासवर्ड पाउने, ब्रोकर धाउनु नपर्ने
काठमाण्डौ । अब लगानीकर्ताले अनलाइन युजर आईडी र पासवर्ड लिन ब्रोकर कार्यालय नगई अनलाइनबाटै पाउने भएका छन्। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) ले अनलाइन कारोबार प्रयोजनका लागि लगानीकर्ता र ब्रोकरबीच हुने सम्झौता अनलाइन माध्यमबाटै गर्न ब्रोकर कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको हो। कोरोनाभाइरसको संक्रमण पछिल्लो समय ह्वात्तै बढेको र...
काठमाण्डौ । पछिल्लो समय अनलाइन कारोबार गर्नेको संख्यामा ह्वात्तै बढेका छन्। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) ले आज शुक्रबार प्रकाशित तथ्यांकअनुसार हालसम्म अनलाइन युजर र आईडी लिई सेयर खरिदबिक्री गर्नेको संख्या ५७ हजार १५६ रहेको छ। जुन दुई साताअघि नेप्सेले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकको तुलनामा १० हजार १३० ले बढी हो। यसअघि नेप्सेले यो...
काठमाण्डौ । कोरोनाको संक्रमण तीव्र रुपमा फैलिएको भन्दै वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयबाट प्रदान हुने प्रायः सबै सेवा साउन ३२ गते (आइतबार) देखि लागू हुने गरी बन्द गरेको छ। बोर्डको सचिवालयले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बोर्डबाट उपलब्ध हुँदै आएका आर्थिक सहायतालगायतका सेवाहरु भदौ १५ गतेसम्मका लागि बन्द हुने जनाइएका छ। बोर्डबाट प्रदान...
नेपालमा अनलाइनबाट सेयर कारोबार गर्ने १७.७७% मात्र, २० दिनमै बढे १३५९७ कारोबारी
काठमाण्डौ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार धितोपत्र दोस्रो बजारमा १७.७७ प्रतिशत लगानीकर्ताले अनलाइन प्रणालीबाट सेयर कारोबार गर्ने गरेको देखिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले हिजो आइतबार प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार नेपालभर अनलाइन प्रणालीबाट सेयर कारोबार गर्नेहरु ४७ हजार २६ जना रहेका छन्। जब कि सक्रिय कारोबारी २ लाख ६४ हजार ६३३ जना रहेको...
काठमाण्डौ । अनलाइन प्रणालीबाट सेयर कारोबार गर्नेको संख्या पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले हिजो सोमबार प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार नेपालभर अनलाइन प्रणालीबाट सेयर कारोबार गर्नेको संख्या ३३ हजार ४२९ पुगेको छ। पाँच महिनाअघि अनलाइन प्रणालीबाट सेयर कारोबार गर्नेको संख्या २० हजार ३२५ रहेको थियो। यो...
अनलाइन लगइन वितरणमा भिजन अगाडि, प्रयोगकर्ता २० हजार मात्र
काठमाण्डौ । बजारमा बुल रन सुरु भएसँगै अनलाइन प्रणालीबाट सेयर कारोबार गर्नेको संख्या पनि बढ्न थालेको छ । बजारमा बुल रनको माहौलमा सक्रियसँगै निष्क्रिय र नवप्रवेशीहरु पनि सेयर कारोबारमा झुम्मिन थालेपछि अनलाइन प्रणालीबाट सेयर कारोबार गर्नेको संख्या बढ्न थालेको हो । पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा अनलाइन प्रणालीबाट सेयर कारोबार गर्नेको...
'बुल रन' मा अनलाइनबाट सेयर कारोबार गर्ने बढे
काठमाण्डौ । बजारमा बुल रन सुरु भएसँगै अनलाइन प्रणालीबाट सेयर कारोबार गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको देखिएको छ । नेप्सेले हरेक महिना सार्वजनिक गर्ने ब्रोकरवाइज अनलाइन सेयर कारोबारीहरुको पछिल्लो दुई महिनाको तथ्यांकले अनलाइन प्रणालीबाट सेयर कारोबार गर्नेहरुको संख्या ह्वात्तै बढेको देखाएको हो । तथ्यांकअनुसार पछिल्लो एक महिनाको...
अनलाइन कारोबार प्रणाली 'असफल', १३ महिना बित्दा १.२१% लगानीकर्ता मात्र आबद्ध
काठमाण्डौ । सेयर बजारमा अनलाइन कारोबार प्रणाली लगभग असफल बनेको छ । यो प्रणालीप्रति लगानीकर्ताको विश्वास अत्यन्त न्यून रहनुले पनि यसलाई प्रमाणित गर्छ । अनलाइन कारोबार प्रणालीको सुरुवात भएको १३ महिना बढी भइसक्दा समेत यूजर र पासवर्ड लिएर अनलाइन कारोबार गर्ने लगानीकर्ताहरुको संख्या अत्यन्त न्यून रहेको छ । नेप्सेले अनलाइन कारोबार...
नेप्सेको सर्भर रुममा निर्वाध मोवाइल चलाउँछन् कर्मचारी, इन्साइडर ट्रेडिङको खतरा(भिडियोसहित)
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड(नेप्से)ले दोस्रो बजारमा धितोपत्र कारोबारका लागि सञ्चालनमा ल्याएको नट्स(नेप्से अनलाइन ट्रेडिङ)को सर्भर रहेको नेप्से भवनमै नेप्सेका आइटी अधिकारी र सिस्टम आपूर्तिकर्ताहरुले निर्वाध मोबाइल चलाएकोमा बजारसम्बद्ध सरोकारवालाहरुले विश्वमै नभएको प्रचलन भन्दै तीव्र विरोध जनाएका...
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) ले अनलाइन प्रणालीमार्फत सेयर कारोबार सुरुआत गरेको सात महिना बितिसक्दा पनि यसप्रति लगानीकर्ताको उत्साहजनक सहभागिता देखिएको छैन । नेप्सेले गत वर्ष कात्तिकको तेस्रो हप्ता अनलाइन सेयर कारोबार प्रणाली सुरु गरेको हो । मुलुकभर १५ लाखको हाराहारीमा सेयर लगानीकर्ता रहेको अनुमान गरिन्छ ।...
लगानीकर्तालाई लगइन किन नदिएको ? ब्रोकर भन्छन्–‘निर्देशन र सिस्टमबीच तालमेल नमिलेर’
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड(नेप्से)को अनलाइन कारोबार प्रणाली(नट्स)को प्रयोगमा दिइएको निर्देशन र उपलब्ध सिस्टमबीच तालमेल नहुँदा ब्रोकर र लगानीकर्ता अन्यौलमा परेका छन् । ब्रोकरहरुले अनलाइन युजर नेम र पासवर्ड दिन अस्वीकार गर्नका पछाडिको कारणको रुपमा ‘प्रयोगकर्ताहरुले कारोबार नहुने संस्थापक सेयरमा खरिद...
ब्रोकरले लगानीकर्तालाई अनलाइनको लगइन सहजै उपलब्ध नगराएपछि नेप्सेको यस्तो निर्देशन
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमीटेड(नेप्से)ले अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम(नट्स)को लगइन ब्रोकरहरुले लगानीकर्तालाई सहज रुपमा उपलब्ध नगराएको बताएको छ । बुधबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै नेप्सेले लगानीकर्ताहरुबाट नट्समा अनलाइन कारोबारका लागि लगइन दिने विषयमा ब्रोकरहरुले असहयोग गरेका गुनासो आएको भन्दै यसप्रति आफूहरुको गम्भीर...
BREAKING : नेप्सेको अनलाइनको बिषयमा छानबिन माग गर्दै अख्तियारमा उजुरी
काठमाण्डौ । नेप्सेको अनलाइन कारोबार प्रणाली र यसको खरीदको बिषयमा छानबिनको माग गर्दै केही लगानीकर्ताले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका छन् । सेयर लगानीकर्ताहरु कुमार सिटौला, माधव गौतम र ईश्वर गुरुंगले संयुक्त रुपमा सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एक उजुरी दर्ता गराएका हुन् । उनीहरुले नेपाल...
नेप्सेको अनलाइनप्रति अर्थको चासो, अनुगमन गरी प्रभावकारी बनाउन बोर्डलाई निर्देशन
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको अनलाइन कारोबार प्रणालीको भद्रगोलप्रति अर्थमन्त्रालयले चासो दिएको छ । अर्थमन्त्रालयले सोमबार पूँजीबजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डलाई अनलाइन कारोबार प्रणालीको प्रभावकारिताको नियमित अनुगमन गर्न र यो प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको हो । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार...
अनलाइनको नाममा 'अपराध': ब्रोकर र लगानीकर्ताको सूचना ३ महिनासम्म लिक भएको खुलासा
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड(नेप्से) र डाटा हब सेन्टर वाइको कम्पनीको गम्भीर त्रूटि र चरम लापरवाहीका कारण विगत ३ महिनाअघिदेखि गोप्य भनिने फ्लोरसिटमा अनलाइन लगईन लिएका ब्रोकर तथा लगानीकर्ताहरुले एकअर्काको डाटा तथा गोप्य सूचना निर्वाध हेर्ने गरेका रहस्य खुलेको छ। नेप्सेको कमजोर सुरक्षा प्रणालीकै कारण...